तथ्य यो हो ! – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By Digital Khabar Last updated Jan 7, 202090
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको उपस्थीतिमा भएको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ शुभारम्भको बिषयमा जे समाचार आएका छन् । ती समाचारहरु तथ्यभन्दा धेरै टाढा छन् । भएको यो हो :-
मंगलबार माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र न्यू साउथ वेल्स राज्य संसदका सम्माननीय सभामुख जोनाथन ओ डीले संयुक्त रुपमा सिड्नीको सर्कुलर क्युवेमा आयोजित एक कार्यक्रममा भ्रमण वर्षको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । शुभारम्भ कार्यक्रममा त्यहाँका विपक्षी दलका नेता, नगरपालिका प्रतिनिधि लगायतले शुभकामना दिनु भएको थियो । शुभारम्भमा मन्त्रीले अस्ट्रेलियामा डढेलोका कारण भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सहानुभूति प्रकट गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपाल र नेपाली जनता अस्ट्रेलियाको दुःखमा साथमा रहेको बताउदै आफ्ना कूटनीतिक नियोग तथा नेपालीहरुलाई सहयोगमा जुट्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
त्यही क्रममा नेपालीहरुले डढेलो पीडितका लागि सहयोग संकलन समेत गर्नुभएको थियो । यसपछि केही बेर मौन र्‍याली समेत निकालिएको थियो । सर्कुलर किस्थित कस्टम हाउसदेखि ओपेरा हाउससम्म निकालिएको मौन र्‍यालीमा नेपालीहरु आ-आफ्नो सास्कृतिक पहिरन र पहिचान सहित सहभागी थिए । र्‍यालीमा माननीय मन्त्री भट्टराईसँगै अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महामहिम महेशराज दाहाल, कन्सुलरहरु दीपक खड्का र चन्द्र योन्जनसहित १०० भन्दा बढी सहभागी थिए। तर, ओपेरा हाउस पुगेपछि सुरक्षाकर्मीहरुले सहभागीहरुलाई व्यवसायिक ब्यानरसहित नजान अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि सहभागीहरुले बढो अनुशासनपूर्वक ब्यानर हटाएर ओपेरा हाउस पुगेका थिए । यही बिषयलाई कार्यक्रममै अबरोध भनेर प्रचार र प्रपोगान्डा भएको छ । गरिएको छ । तथ्य यही हो । अरु काल्पनिक र प्रयोजित कथाहरु हुन् ।